I-NATR5PP Uhlobo lwe-Yoke Uhlobo lwe-Roller eveza - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
I-NATR5PP Yoke Uhlobo I-Roller Beza
Uhlobo lwe-NATR5PP ye-yoke ye-yoke ye-roll roll bearing
Uhlobo lwe-Yoke uhlobo lwama-rollers lwakhiwe ngamakamelo angashadile noma amabili emigqa egciniwe egibele ezakhiweni noma ezigxotsheni. Zakha izindandatho zangaphandle ezigqinsiwe ngezingqimba zangaphandle ezifakwe ngaphakathi kanye nezingqungquthela zezinaliti kanye nezinqolobane noma ukugcwalisa okugcwele isaliti noma ama-cylindrical roller.
Uhlobo lwe-Yoke uhlobo lwama-rollers lungaxhasa imithwalo yemisebe ephezulu kanye nemithwalo ye-axial evela ekusetshenzisweni okungalungile nokugijima okukhishwe; zifanelekile izicelo ezifana namak gears, izindlela zokulala kanye nemishini yokuhambisa.
Ama-bearings atholakala ngaphandle nangaphakathi kwendandatho yangaphakathi nakuzo zombili izinguqulo ezivuliwe nezivulekile.
Roller Bearing, Steel Stainless